Bogga ugu weyn 20ka Shirkadood ee Caymiska Guriga ugu Fiican 2021
Hantida ugu qiimaha badan inta badan dadka Maraykanku waa gurigooda, caymiska mulkiilayaasha guryuhuna wuu ku kala duwan yahay iyada oo ku saleysan haddii aad ku nooshahay guri, kondho, guri wareeg ah, ama dhismo cusub. Marka ay timaado ceymiska mulkiilayaasha guriga, waxaa muhiim ah in la hubiyo in aad leedahay caymis ku filan gurigaaga iyo dhismooyinkaaga, alaabtaada gaarka ah, iyo deymaha shakhsi ahaaneed.
Maqaalkan, waxaanu ku eegi doonaa liiska 20ka shirkadood ee caymiska guriga kuugu fiican. Waxaan eegi doonaa mid kasta oo ka mid ah shirkadahan, kuu sheegi doonaa waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato iyaga oo aan baarno meelaha ay ku wanaagsan yihiin iyo daciifnimadooda.
Si taxaddar leh u akhri maqaalkan maadaama ay ka buuxaan macluumaad iyo aragtiyo badan.
Kahor intaanan ku siin liiska 20ka shirkadood ee caymiska ugu fiican, aan kuu sheegno wax ku saabsan Caymiska Guriga.
Waa maxay Caymiska Milkiilayaasha Guri?
2. Beerta Gobolka
5. Liin dhanaan
7. Xorriyadda Mutual
13. Dalka oo dhan
15. Dhaqaalaha Dalka
16. Caymiska Milkiilayaasha Baabuurta
17. Caymiska Milkiilayaasha Guryaha ee Horumarka leh
18. Erie Caymiska
19. Qoyska Maraykanka
20. Caymiska Beeralayda
FAQs ee Caymiska Guriga
Caymiska mulkiilaha gurigu waa ururinta ikhtiyaarada caymiska ee loogu talagalay in lagu ilaaliyo maalgashigaaga maaliyadeed ee gurigaaga. Waxay ka ilaalisaa guriga, dhismayaasha kale sida deyrarka, iyo alaabta shakhsi ahaaneed shilalka iyo dhibaatooyinka sida dabka guriga iyo tuugada.
Caymiska mas'uuliyadda waxaa lagu daraa caymiska mulkiilaha guriga, wuxuuna daboolaa burburka hantida iyo dhaawacyada xubnaha qoyskaagu u geystaan ​​kuwa kale. Haddii lagugu dacweeyo dhaawac ama burbur hanti, caynsanaanta masuuliyaddu waxay dabooshaa difaacaaga sharciga ah iyo dejinta.
Caymiska mulkiilayaasha, oo loo yaqaan caymiska guriga, waa qayb muhiim ah oo ka mid ah lahaanshaha guri. Ma aha oo kaliya inta badan amaah-bixiyeyaashu waxay dalbanayaan markaad guri iibsanayso, laakiin ilaalinta ay bixiso siyaasad hufan ayaa kaa badbaadin karta lacag haddii masiibo dhacdo.
Caymiska mulkiilaha gurigu wuxuu daboolaa kharashka dib u dhiska ama bedelida qaab dhismeedka gurigaaga iyo waxa ku jira, taas oo ah hantidaada ugu qiimaha badan. Mas'uuliyadda shakhsiga ah iyo kharashyada kale ee jeebka ka baxsan ayaa sidoo kale la daboolay.
Shirkadaha Caymiska Guriga ee ugu Fiican
Hoos waxaa ku qoran liiska 20 ka Shirkadood ee Caymiska Guriga ugu Fiican:
Caymiska Lahaanshaha Lahaanshaha ah
Caymiska Milkiilayaasha Guryaha Horumarka leh
Laga soo bilaabo 1931, Allstate waxay u adeegtay milkiilayaasha guryaha ee dalka oo dhan sidii mid ka mid ah sidayaasha caymiska ugu weyn qaranka. Waa shirkad caymis oo caan ah oo leh AM Best rating of A+ (Superior). Allstate waxay bixisaa baabuur, kirayste, nolosha, iyo mootada caymiska guriga, waxayna bixisaa qiimo dhimis siyaasado badan.
Alaabooyinka caymiska ee mulkiilaha gurigu wuxuu bixiyaa hanti shaqsiyeed iyo caymis masuuliyadeed oo laga yaabo in la habeeyo. Boggeeda internetka, Allstate waxa kale oo ay leedahay qalab qiimeeya qiimaha guriga kaas oo ka caawin kara mulkiilayaasha guriga si ay u ogaadaan inta caymis guri ay u baahan yihiin.
Caymiska Guriga Allstate waxa laga heli karaa 50 ka gobol. Waxay kaloo leeyihiin kaydinta Bundling ee RateGuard waa la heli karaa. Gobolada qaar, qiimayaasha onlaynka ah lama heli karo Qiimuhuna waa tad ka sarreeya celceliska qaranka.
Akhri wax dheeraad ah Caymiska Allstate
Beerta Dawladdu waa mid ka mid ah ceymisyada waaweyn ee dalka, oo xafiisyo ku leh dhammaan 50-ka gobol (in kasta oo dhammaantood aysan bixinin qiime online ah). Kaydinta xidhidhka iyo wakhtiyada bilaa-sheegashada ayaa sidoo kale laga heli karaa Beeraha Beeraha. Bixiyuhu wuxuu u adeegaa macaamiishiisa iyada oo loo marayo shabakad wakiilo maxalli ah, isagoo siinaya daryeel shakhsi ahaaneed oo dheeraad ah iyo sheegashada waayo-aragnimada xereynta wakiilka maxaliga ah, taas oo qaar ka mid ah mulkiilayaasha guryaha laga yaabo inay ka door bidaan xarumaha xiriirka caadiga ah iyo sheegashada internetka.
Faa'iidada kale ee Beerta Dawladdu waa xulashooyinkeeda caynsanaanta dheeraadka ah, kuwaas oo bixiyeyaasha kale aysan bixin ama bixin kaliya qiimo jaban. Kharashyada adeegga waaxda dab-demiska, iyo sidoo kale ilaalinta dahabka iyo dhogorta, alaabta qalinka, hantida ganacsiga la xiriirta, iyo hubka, ayaa lagu daray si toos ah oo waa la bedeli karaa markaad iibsato.
Geico waxaa lagu yaqaanaa caymiska baabuurta, laakiin sidoo kale waxay leedahay wax badan oo ay bixiso marka la eego caymiska guriga. Shirkadda inurance ayaa laga heli karaa dhammaan 50-ka gobol waxayna bixisaa caymis la awoodi karo oo leh noocyo badan oo xulasho caymis oo dheeri ah, inkastoo xaqiiqda ah inaysan qorin siyaasadaheeda sida tartamayaasha badan. Taa beddelkeeda, waxay la shuraakoobaysa bixiyeyaasha kale ee wax qora.
Waa doorasho aad u wanaagsan mulkiilayaasha guryaha ee horey u haystay caymiska baabuurta ee Geico oo raba inay xoojiyaan caymiskooda. Xigashooyinka waa la heli karaa iyada oo aan lala hadlin wakiilka Geico, laakiin haddii aad doorbidayso isdhexgalka aadanaha, waxaa jira daraasiin wakiillo Geico ah oo diyaar u ah inay ku caawiyaan.
Socdaalayaashu waa caymis caan ah oo daboolaya mulkiilayaasha guryaha ee Maraykanka tan iyo 1864 oo leh A++ (Superior) qiimeynta xoogga dhaqaale ee AM Best. Waxay siisaa macaamiisha ikhtiyaarada caymiska aasaasiga ah ee hantida gaarka ah iyo caymiska mas'uuliyadda, iyo sidoo kale adeegga macaamiisha 24-saac iyo xarun sheegasho iyo tiro dheeri ah si loogu oggolaado inay hagaajiyaan caynsanaantooda.
Dadka socotada ah ayaa sidoo kale lagu kala soocaa ikhtiyaarkooda laga jari karo, kuwaas oo ka dhammaystiran kuwa ay bixiyaan dhowr tartame. Waxaad ka dooran kartaa sagaal ikhtiyaar oo laga jari karo oo u dhexeeya $1,000 ilaa $50,000, marka loo eego tusaalooyinka tusaalaha ah ee aan helnay intii aan daraasadda ku jirnay, taasoo ku siinaysa koontaroolka lacagta caymiska sanadlaha ah iyo inta aad jeebka ka bixinayso inta lagu jiro sheegashada. Bixiyeyaasha kale, dhanka kale, waxay badanaa bixiyaan shan ilaa todobo doorasho oo laga kala xusho.
Liin dhanaantu waa soo-gale ku cusub waaxda caymiska guriga, laakiin waxa ay hiigsanaysay in ay fududayso habka iibsashada caymiska guriga iyo bixinta go'aannada sheegashooyinka degdega ah tan iyo 2015. Waxa kale oo ay bixisaa caymiska kiraystaha, caymiska nolosha, iyo caymiska xayawaanka, iyadoo qiimo dhimis loo heli karo dhowr- xidhmooyinka siyaasadda.
In kasta oo Lemonade uu ka hooseeya celceliska C ee Better Business Bureau (BBB) ​​iyadoo ay ugu wacan tahay cabashooyin tiro badan oo aan caadi ahayn, haddana waxaan kula talinaynaa shirkadda sababtoo ah inta badan cabashooyinkeeda waxay leeyihiin jawaabo dabagal ah bixiyaha si ay isugu dayaan inay xalliyaan arrimaha ay soo jeediyaan macaamiishu, waana shirkad da'yar oo waqti yar haysata si ay sumcadeeda u dhisto. Liin dhanaantu hadda waa laga heli karaa 23 gobol iyo Washington, DC
Akhri ALSO: Hagahaaga Tallaabo-tallaabo ah ee Doorashada Qorshaha Caymiska Caafimaadka
USAA waa shirkad caymis guri oo la sameeyay 1922 waxaana la siiyaa xubnaha ciidamada qalabka sida ee Maraykanka iyo qoysaskooda. In kasta oo ay leeyihiin saldhig macaamiil ka yar qaar badan oo ka mid ah tartamayaasheeda, USAA waxay leedahay in ka badan 13 milyan oo macaamiil ah, taasoo muujinaysa caymiskeeda sare.
Qorshayaasha kale ee ay bixiyaan USAA waxaa ka mid ah caymiska baabuurta, caymiska kiraystayaasha, iyo caymiska nolosha, oo leh qiimo dhimis ay heli karaan xubnaha xidhidha siyaasado badan. Waxa kale oo laga yaabaa inay daryeesho baahiyahaaga maaliyadeed ee kale, sida bangiyada, amaahda guryaha, iyo deymaha gaadiidka, taasoo kuu ogolaanaysa inaad dhammaan dhaqaalahaaga ku ilaaliso hal meel.
Akhri ALSO: Amaahda Bilowga Xirfadda USAA: Ogow tan ka hor intaadan deyn qaadan 2021
Liberty Mutual waa bixiyaha caymiska guryaha ee ugu sarreeya oo leh in ka badan 110 sano oo waayo-aragnimo ah xagga warshadaha iyo AM Darajada xoogga dhaqaale ee ugu Fiican ee A (Excelent). Websaydhkeeda iyo abka moobaylka ayaa bixiya baabuur, kiraysteyaal, guri, iyo xalal caymis ganacsi, iyo sidoo kale maarayn siyaasad ku habboon.
Caymiska gurigeeda ayaa ka soo horjeeda tartanka sababtoo ah kharashkooda yar, caynsanaanta dabacsan oo leh tiro badan oo ikhtiyaari ah hantida shakhsi ahaaneed iyo caymiska mas'uuliyadda, iyo tiro balaadhan oo ah fursadaha dhimista. Waxaa jira habab badan oo aad ku badbaadsan karto bixiyahan, haddii aad isku dayayso inaad xidho gurigaaga iyo caymiska baabuurkaaga ama aad wax ka iibsanayso siyaasad ka hor inta aanu kaa dhicin.
Akhri WARBIXIN DHEER AH Dib -u -eegista Caymiska Gawaarida ee Xorriyadda ee 2021: Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Legit & Fadeexad | Sida ay u shaqayso
Caymiska guriga Amica Waxay ku siinaysaa caymiska aasaasiga ah ee aad filayso, iyo sidoo kale adeegga macaamiisha oo aad u wanaagsan. Qorshaha Xulashada Platinum wuxuu bixiyaa caymis dheeraad ah, oo ay ku jiraan caynsanaanta degganaanshaha dheer, xaddidaadda mas'uuliyadda weyn, iyo caymiska waxyeellada ay sababto bullaacadaha la taageeray ama matoorada qashinka ee buuxdhaafay.
Xidhiidhka Qandaraaslaha waa hindise Amica ah oo ku xidha macaamiisha qandaraasleyaal shati iyo caymis leh. Qiimo dhimis ayaa sidoo kale laga helayaa shirkadda Haysashada isku shirkad caymis ugu yaraan laba sano, Caymiska guri dhawaan la dhisay ama la cusboonaysiiyay, iyo biilasha waxaa lagu helaa qaab elektaroonig ah oo si toos ah loo bixiyo bil kasta.
Post laxiriira: Dib u eegida Caymiska Milkiilayaasha Guryaha Amica 2021: Ma sharci baa mise waa khiyaamo?
Chubb waxa ay khibradeeda ugu badan siisaa macaamiisha hodanka ah, iyada oo diiradda saarta kuwa leh guryaha raaxada. Waxay leedahay xulashooyin caymis oo kala duwan, oo ay ku jiraan kuwa aan caadi ahayn sida HomeScan, kaas oo kaa caawinaya inaad hesho welwelka gurigaaga ee u baahan in wax laga qabto ka hor intaanay waxyeello geysan.
Iyada oo qayb ka ah caymiskeeda caadiga ah, Chubb waxa kale oo ay bixisaa kharashka beddelka dheer ee guriga iyo qiimaha beddelka alaabta, taas oo faa'iido aan caadi ahayn u ah macaamiisha. Tani waxay tusinaysaa in haddii kharashka dib-u-dhiska gurigaaga ka dib musiibo daboolan ka badan tahay intii la filayey, Chubb waxa uu bixin doonaa wax ka badan xadkaaga hoy ee loo dejiyay si uu kaaga caawiyo daboolida kharashka. Waxa kale oo ay tusinaysaa in aad heli doonto lacag kugu filan oo aad alaabtaada dhaawacantay ku beddesho kuwa cusub, halkii aad ka heli lahayd qiimo jaban oo kaliya.
Hippo, oo la aasaasay 2015, waxay diiradda saartaa tignoolajiyada iyo waayo-aragnimada macaamiisha, oo leh 60-ilbiriqsi "xigasho degdeg ah" oo loogu talagalay isbarbardhigga qiimaha degdegga ah. Qaar ka mid ah waxyaabaha dheeriga ah ee la socda caymiska Hippo, oo ay ku jiraan nidaamka la socodka guriga ee caqliga leh iyo isku xirka casriga ah ee la taliyayaasha dayactirka guriga, ayaa muujinaya diiradda shirkadu.
Dhawr ka mid ah heshiisyada Hippo waxay ku wajahan yihiin amniga guriga. Macaamiishu waxay ku badbaadin doonaan lacagta khidmadaha caymiska haddii ay haystaan ​​dab-bakhtiyeyaal oo ay ku nool yihiin bulsho albaabaysan.
Kin, oo ah ciyaaryahan ku cusub suuqa caymiska guriga, ayaa la bilaabay 2016. Caymiska guri ee caadiga ah waxa uu daboolaa waxyaabaha gaarka ah ee ku salaysan qiimaha beddelka, taas oo macnaheedu yahay in haddii kaaga la xado ama lagu dhaawaco musiibo caymis ah, shirkaddu waxay ku siin doontaa lacag kugu filan beddelkooda.
Iyadoo ku xiran meesha aad degan tahay, waxaa laga yaabaa inaad ku darto caymiska xatooyada aqoonsiga, burburka biyaha, iyo alaabta qiimaha sare leh sida dahabka. Ku rakibida digniinaha amniga iyo dabka, iyo sidoo kale samaynta dadaalka aad hantidaada uga ilaalin lahayd dabaysha, waxay kaa caawin kartaa inaad lacag ku kaydsato caymiskaaga.
ARAG SIDOO KALE: Dib -u -eegista Shirkadaha Caymiska Baabuurka ugu jaban 15
Kaliya shan gobol ayaa u adeega Caymiska NJM, laakiin haddii aad ku nooshahay mid ka mid ah, waxaad heli doontaa deeqsinimo caymiska milkiilayaasha guryaha kaas oo ka kooban noocyo badan oo caymis ah oo caymisyada kale lacag dheeraad ah ka qaadaan. Tusaale ahaan, haddii gurigaaga la burburiyo, dammaanadda caymiska kharashka beddelka ee shirkadu waxay bixin doontaa dib u dhiska, xitaa haddii burburku ka badan yahay xadkaaga guriga.
NJM waxay bixisaa khibrad khadka ah ee isticmaale-saaxiibtinimo taasoo ka dhigaysa maaraynta sheegashooyinka dabaylo. Dadka aan sigaarka cabbin iyo dadka da'doodu ka weyn tahay 65 jir ayaa sidoo kale kayd u ​​ah khidmadooda.
Xaqiiqda ah in Qaranka oo dhan ay ku jirto qaynuunka ama caymiska sharciga ee caymiska caadiga ah ee mulkiilaha gurigu waxay kala saartaa. Tani waxay tusinaysaa haddii aad la kulanto khasaare caymis ah oo aad u baahan tahay inaad dib u cusboonaysiiso hantidaada si aad ugu hoggaansanto sharciyada dhismaha ee hadda jira, shirkaddaada caymiska ayaa laga yaabaa inay bixiso.
Dalka oo dhan ayaa sidoo kale lagu ammaanaa adeegga macaamiisha ee wanaagsan. Xeer-ilaaliyeyaashu waxay xerayn karaan oo ay kala socon karaan sheegashooyinka onlayn ama taleefan, mareegta shirkadu waxay ku jirtaa xog la taaban karo oo macaamiisha diiradda saareysa.
Hanover-gu waxa uu bixiyaa habab kala duwan oo lagu habayn karo siyaasadda mulkiilaha gurigaaga, oo ay ku jiraan caymiska waxyeelada ay sabab u tahay kaydka biyaha ama kharashyada la xidhiidha in gurigaaga la gaadhsiiyo xeerarka dhismaha ee hadda jira musiibo ka dib. Waxa kale oo aad dooran kartaa dammaanad caymiska kharashka beddelka si aad u ogaato inaad haysato lacag kugu filan oo aad dib u dhisto, xitaa haddii kharashyadu ka sarreeyaan intii la filayey.
Haddii aad iibsato siyaasadda Prestige ee shirkadda, oo loogu talagalay guryaha qiimaha sare leh, ma bixin doontid wax laga jari karo sheegashooyinka ka sarreeya $50,000.
Masiibooyinka qoyska, sida gubashada dusha sare ama rinjiga daadanaya, waxaa daboola Maaliyadda Dalka. Maaliyadda Waddanka waxa ay bixisaa dammaanad caynsanaanta kharashka beddelka ee gobollada intooda badan, kaas oo daboolaya kharashka caadiga ah ee qalabka dhismaha cusub iyo shaqada aan xad lahayn haddii aad u baahan tahay inaad dib u dhisto gurigaaga.
Macaamiishu waxay kasban karaan qiimo dhimis sifooyinka la xidhiidha badbaadada, sida, Xadhkaha Korontada oo dhawaanahan, Isha kulaylka oo la isku hallayn karo
Iyadoo Auto-Owners ay caan ku tahay caymiska baabuurta, waxay sidoo kale iibisaa caymiska guriga waxayna caymisaa qiyaastii 1.5 boqolkiiba dhammaan guryaha Maraykanka. Shirkaddan caymisku waxay u taagan tahay iyada oo ay ugu mahadcelinayso qiimaynteeda aadka u fiican, iyo sidoo kale sheegashooyinka xooggan iyo qiimaynta adeegga macaamiisha.
Shirkadan caymiska waxaa la aas aasay 1937-kii, waxaana aasaasay laba qareen oo doonayay inay ganacsi bilaabaan. Horumarka hadda waa caymiska guriga tobnaad ee ugu weyn Maraykanka. Mayfield Village, Ohio waa xarunta shirkadda.
Caymiska guryaha ee horumarka leh waxaa ka mid ah noocyada soo socda ee caymiska: caymiska guriga, caymiska dhismayaasha kale, caymiska hantida shakhsi ahaaneed, iyo caymiska mas'uuliyadda.
ARAG SIDOO KALE: Dib u eegida Caymiska Beeralayda 2021: Faa'iidooyinka & Qasaaraha | Legit Mise Fadeexad | Siday U Shaqeyso
Erie waxaa lagu kala soocaa qiimaheeda jaban, adeegga macaamiisha ee wanaagsan, iyo fursadaha daboolida guryaha oo la ballaariyay. Haddii aad ku nooshahay mid ka mid ah gobolada Erie lagu bixiyo, waa caqabad adag marka ay timaado caymiska mulkiilayaasha.
Caymiska Erie, oo la aasaasay 1925-kii, waxa uu leeyahay in ka badan 6,000 oo shaqaale ah iyo 13,000 oo dilaaliinta madax-bannaan. Liiska Fortune 500 ee 2021, shirkadda waxaa la galiyay 347. Erie Insurance waa mid ka mid ah bixiyeyaasha caymiska guriga ee ugu weyn dalka. Erie waa bangi heer gobol ah oo ka hawl gala 12 gobol iyo Degmada Columbia.
Sanadkii 1927-kii, Caymiska Qoyska Mareykanka wuxuu bilaabay bixinta alaabada caymiska beeraleyda Madison, Wisconsin. Maanta, Caymiska Qoyska Mareykanka waa mid ka mid ah bixiyeyaasha caymiska guriga ee ugu weyn dalka. Inkasta oo Qoyska Maraykanku ay bixiyaan qiimo jaban, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad meel kale ka raadiso haddii aad haysato eey ku jira liiska xaddidan. Kharashyada caymiska gurigu waa mid tartan badan, waxaana jira cabashooyin yar oo ku saabsan. Waxay bixisaa kharash dheer iyo dammaanad ah oo beddelka guryaha.
Caymiska Beeralayda waxaa la aasaasay 1928-kii waxaana uu hadda gacanta ku hayaa in ka badan 19 milyan oo caymis oo shakhsi ah oo loogu talagalay in ka badan toban milyan oo qoys dhammaan 50-ka gobol. Waa mid ka mid ah shirkadaha caymiska guryaha ee dalka ugu weyn.
Caymiska guriga beeralayda ayaa bixiya noocyadan caymis ee caadiga ah. Beeraleydu waa bedel weyn oo loogu talagalay suurtogalnimada caynsanaanta dheer, taas oo noqon karta maalgashi caqli-gal ah haddii ay dhacdo musiibo.
Hadda oo aad wakhti qaadatay si aad u akhrido 20ka shirkadood ee caymiska guriga ugu fiican, fadlan si fiican u dooro caymiska ku habboon baahiyahaaga guriga iyo kaaga.
Waxa aanu rajaynaynaa in aad maqaalkan ka heshay xog iyo xog-ururin sidii ballanku ahaa.
Waa maxay dhabta ah 80% qaanuunka?
Marka ay timaado caymiska guriga, bixiyeyaal badan ayaa raacaya sharciga boqolkiiba 80. Xeerkan aan qornayn waxa uu dhigayaa in shirkadaha caymisku ay kaliya bixin doonaan caymis buuxa ka dib musiibo haddii siyaasaddaadu ay daboosho ugu yaraan 80% dhammaan qiimaha beddelka gurigaaga. Shirkaddu waxay kaliya kuu soo celin kartaa qaddar saami ah haddii cadadka caymiska la iibsaday uu ka yar yahay 80%. Markaad hesho caynsanaantaada, hubi inaad waydiiso bixiyaha caymiskaaga qodobkan.
Waa maxay sababta caymiska gurigaygu uu qaali u yahay?
Tani waa sababta oo ah khidmadaha caymiska mulkiilayaasha guryaha waxaa lagu go'aamiyaa shuruudo kala duwan, waxaa jiri kara sababo dhowr ah oo heerar aan caadi ahayn oo sarreeya. Tusaale ahaan, marka gurigaagu weynaado, waxa uu noqonayaa mid qaali ah in la caymiyo maadaama qaabdhismeedkiisu u badan yahay in uu u baahan dayactiro natiijada dhacdooyinka caymisku.
Waa maxay habka loo iibsado siyaasadda caymiska guryaha?
Iibka caymiska gurigu waa nidaam sahlan, haddii aad iibsanayso guri cusub oo aad u baahan tahay inaad siyaasad u hesho ama aad raadinayso inaad ku darto caymis guri aad lahayd in muddo ah. Waxaad ka heli doontaa bixiyaha qiyaasta ku salaysan shuruudahaaga saxda ah, mid online ah ama la-tashiga wakiilka caymiska, ka dibna waxaad dejin doontaa siyaasaddaada taariikhda bilawga ah ee aad u baahan tahay.
Muxuu caymiska gurigu aanu daboolin?
Caymiska gurigu wuxuu kaa ilaalinayaa dhaqaale ahaan haddii ay dhacdo musiibo ama shil. Caadi ahaan, dab, xatooyo, kharribaad, qiiq, iyo dhaawac shakhsi ah ayaa la daboolaa. Inta badan qorshooyinka caadiga ah kama daboolaan dhulgariirrada ama daadadka, laakiin bixiyeyaal badan ayaa bixiya caymiska musiibooyinkan si lagu daro. Dayactirka looga baahan yahay dayactirka guriga oo aan ku filnayn lama daboolo.
Sidee bay u shaqeeyaan caymisyada guryaha laga jarayo?
Waxa lagaa jarayaa waa cadadka ay tahay inaad bixiso ka hor intaysan shirkaddaada caymis bixin inta ka hadhay kharashaadka dayactirka. Haddii lacagta lagaa jarayo ay tahay $1,000 oo dayactirkaagu uu ku kacayo $5,000, waxaad masuul ka noqon doontaa $1,000 oo caymiskaagu wuxuu dabooli doonaa inta kale.
Aaladaha Guriga Smart ee Jaban ee Gurigaaga | 2021 Faallooyinka Ugu Fiican
Waa ayo Wakiilka Caymiska Madaxbanaan?
Dheefta labada dhinac waxay si gaar ah u iibisay caymiskeeda iyada oo loo marayo wakiillo madax-bannaan in ka badan 100 sano. Waxaan si toos ah u aragnay sida…
Caymiska Nolosha ee Ladder Life waxa uu bixiyaa caymiska nolosha muddada khadka tooska ah oo heerar macquul ah, gaar ahaan haddii aad u baahan tahay…